အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊? အကောင်းဆုံး Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
ပုံစံ - STR-V4 Series
အော်တို-Roll Making Machine Servo Co တွင် Core Bag ကိုပြောင်းပါ။-မြန်နှုန်းစနစ်(၌-လိုင်း extruder ဖြစ်နိုင်ခြေ)
ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်တင်ဖြင့် အိတ်အရှည်နှင့် တင်းအားကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲပါ။.
ပုံနှိပ်ခြင်းအမှတ်အသားလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Perforated pitch ဖြစ်နိုင်ခြေ. (ရွေးချယ်ခွင့်)
ထုတ်ကုန်များသည် အနေအထားအပြည့်နှင့် လှိမ့်နေသည့်အခါ အလိုအလျောက် လွှတ်တင်ခြင်းနှင့် မော်တာအစွန်းအနေအထားကို ချိန်ညှိပါ။.
ထုတ်ကုန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက် hot slitting စနစ်ဖြင့်မျဉ်းနှစ်ကြောင်းပြန်ရစ်သည်။. (အပိုအမျိုးအစား)
ထုတ်ကုန်နှစ်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက် မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို ဖြေလျှော့ခြင်းဖြင့် စာကြောင်းနှစ်ကြောင်း ပြန်ရစ်သည်။. (အပိုအမျိုးအစား)
လိုင်း STR-400V4-A21 ၁ x ၂၃၀~375
Roll max.၁၃၀ 200~၂၀၀၀/
STR-500V4-A21 ၁ x ၃၃၀~475
Roll max.130 200~၂၀၀၀/
STR2-800V4-A22 ၂ x ၂၂၀~350
လိုင်း STR-400V4i-A21 ၁ x ၂၃၀~375
STR-500V4i-A21 ၁ x ၃၃၀~475
STR2-800V4i-A22 ၂ x ၂၂၀~350
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/core-bag-on-roll-machine.html
ငါတို့မှအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ခမ်းနားထည်ဝါသောအသုံးအစုအဝေး Available Core Bag ပေါ်တွင် Roll Machine ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီအခြေခံကျသောပစ္စည်းမှလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ Assisted, SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးမှာဒီဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပိုင်းပုံစံကဒီကျနော်တို့ standard နှင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများနှစ်ခုလုံးတွင်အဆိုပါတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဤနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုတစ်ဦးလျှင်အဖြစ်အထွဋ်အထိပ်တန်းပစ္စည်းနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြင့်မားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များလုပ်ကြံမှုများနေကြပါတယ်။